Nsọpụrụ Taa: Ekpere maka mgbe ị na-eru uju Onye a Hụrụ n'Anya n'eluigwe | EKPERE NA OZI
Nsọpụrụ nke taa: Ekpere maka mgbe ị n’eru onye ị hụrụ n’anya bi n’eluigwe
Paolo Tescione	Edere ya November 24, 2020 November 24, 2020
Ọ ga-ehichapụ anya mmiri niile n’anya ha, ọnwụ agaghị adị ọzọ, iru uju, ịkwa ákwá ma ọ bụ ihe mgbu agaghịkwa adị, n’ihi na ihe mbụ niile agabigawo ”. - Mkpughe 21: 4
M hulatara makụọ 7 afọ m ma kpee ekpere na ya. Ọ na-ehi ụra n’elu kapeeti n’ime ụlọ ihi ụra m, nke ọ na-eme mgbe ọ nwụsịrị Dan, di m.
Site n'ehihie ọ na-ada ụda dịka ụmụaka niile nọ n'ógbè ahụ. Would gaghị ama na ọ na-ebu akwa mkpuchi nke ihe mgbu.
N’abalị ahụ, m gere ntị ka Matt na-ekpe ekpere. O kelere Chineke maka ezigbo ụbọchị ma kpee ekpere maka ụmụaka gburugburu ụwa chọrọ enyemaka. Ma mgbe ọ gụchara ihe a:
Gwa nna m na m siri hi.
Otu puku mma na-abanye n'ime obi m.
Okwu ndị ahụ nwere mgbu ma nwekwa njikọ.
Dan na akụkụ nke elu-igwe, anyị n'akụkụ a. Ya n'ihu Chineke, anyị ka na-ejegharị n'okwukwe. Ihu ya na ihu na Chineke, anyị ka kpuchie na ebube zuru oke.
Eluigwe dịkarịsịrị ka ọ dị ogologo oge na mbara igwe. Ọ bụ ihe doro anya, mana otu ụbọchị, nke dị anya site na ụbọchị ndụ anyị dị egwu, ịzụ ụmụ na ịkwụ ụgwọ ndị ahụ.
E wezụga nke ahụ, ọ bụghị.
Ọnwụ wetara ihe mgbu kamakwa njikọ. Ọ bụrụ na m nwere ike ịsị na enwere m mmetụta njikọ ahụ na eluigwe na mbụ, mana ọnwụ Dan mere ka ọ dị ngwa ma bụrụ ihe a na-ahụ anya. Dị ka a ga - asị na anyị nwere nkwụnye ego na - eche anyị ozugbo anyị zutere Jizọs.
N'ihi na mgbe ị hụrụ mmadụ n'anya n'eluigwe, ị ga-ebu akụkụ nke eluigwe n'ime obi gị.
Ọ bụ na chọọchị na m nwere ike mfe were Dan n'eluigwe. N'ịbụ onye okwu na egwu nke òtù nzuzo ahụ na-atọ m ụtọ, echere m naanị ya n'akụkụ nke ọzọ nke mgbe ebighị ebi.
Anyị nọ n'oche anyị, ọ nọ n'ezi ụlọikwuu ahụ. Eyesyɛ biribi a eye ma Kristofo. Anyị niile hụrụ ya n'anya. Anyị niile bụ akụkụ ahụ́.
Ahụ Kraịst dị karịa ọgbakọ m. Ọ karịrị ndị kwere ekwe na obodo na-esote na kọntinent ọzọ. Ahụ Kraịst gụnyere ndị kwere ekwe ugbu a na ọnụnọ nke Chineke.
Dika ayi nefe Chineke n’ebe a, ayi sonyere ndi ukwe nke ndi kwere ekwe ndi n’ekpo isi n’eluigwe.
Ka anyị na-ejere Chineke ozi ebe a, anyị na ndị otu kwere ekwe na-eje ozi n’eluigwe.
Dika anyi n’eto Chineke n’ebe a, anyi na esonyere igwe ndi kwere ekwe ndi n’enye otuto n’elu igwe.
Visa na ihe anaghi ahu anya. Akwukwusiri na ndị tọhapụrụ. Ndị ndụ ha bụ Kraịst na ndị ọnwụ ha bara uru.
Ee, onye nwe anyi Jisos gwa ya na anyi kwuru ya.
Ekpere maka mgbe ị na-eru uju onye ị hụrụ n'anya n'eluigwe
Obi m dị ka otu puku mma gafere ya. Ike gwụrụ m, ike gwụrụ na ihe na-ewute m. Nwere ike inyere m aka biko! Nụrụ ekpere m. Lekọta mụ na ezinụlọ m. Nye anyi ume. Benọ ya. Nọgide n'ịhụnanya gị. Kpọrọ anyị gabiga ihe mgbu a. Kwado anyị. Mee ka anyị nwee ọ joyụ na olileanya.
Nke gara aga Post Gara aga post:Tugharia uche taa n'uzo puru iche nke okwu Kraist sirila mebe ndu gi
Next Post → Post ozo:Vatican na-akwado na ndị Kadịnal abụọ ahọpụtara anọghị na ngalaba ahụ